यसकारण केटीहरु अग्लो केटा मनपराउँछन् - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ रोचक ∕ यसकारण केटीहरु अग्लो केटा मनपराउँछन्
यसकारण केटीहरु अग्लो केटा मनपराउँछन्
झिल्को डटकम २०७७, कात्तिक ५ गते ११:१२ मा प्रकाशित
कैयौंपटक युवाहरुलाई लाग्ने गर्छ युवतीहरुले मन पराउन के गर्नुपर्ला ? केटीहरुलाई खुशी बनाउन र दिल जित्न धेरै सावधानी अपनाउनु पर्छ । धेरै केटीहरुले समझदार र स्मार्ट पुरुषलाई मन पराउँछन् । केटा, केटीको नजरमा बस्ने र उनको दिलमा राज गर्न तमाम कोशिश गरेपनि सफलता हात पार्न सक्दैनन । आउनुहोस् हामी आज कसरी केटीहरुको मन पर्ने हुने त त्यसको बारेमा चर्चा गरौ ।
राम्रो स्वभाव हुनु पर्छः केटीहरुलाई यस्ता केटा मन पर्छन् जसले महिलालाई सम्मान गर्छन् । यसरी नै तपाइँले आफ्नी प्रेमिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ । जब तपाइँ कसैलाइृ माया गर्नु चाहानुहुन्छ भने उसको सम्मान गर्नु पर्छ । बिना सम्मानको माया हुन सक्दैन । आफ्नो भावना काबुमा राखेर उनको विचार सुन्नु पर्छ । कहिल्यै पनि उनको अपमान गर्नुहुँदैन । उनका बितेका कुरा गरेर न्यायाधिस बन्नु हुँदैन ।
केटीहरुलाई मन पर्ने अग्ला केटाः केटीहरुलाई अग्लो केटा मन पर्ने सबैभन्दा प्रमुख कारण अंगालो मार्ने समयमा सहज महसुस हुनु हो । अग्ला केटाको लामो हातले केटीको सबैतीर कबर गर्न सक्छ । केटीलाई लाग्छ की लामो कद भएको केटाले शारीरिक सुरक्षा दिनलाई सक्षम हुन्छ । यसैकारण केटीहरु अग्लो केटामा बढि आकर्षित हुन्छन र प्रेमी पनि अग्लो नै चाहान्छन् । एजेन्सी
चप्पल चोरेर लखपति
१२ घन्टामा ९१९ जना पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध !
८८ केजी तौल जबरजस्ती घटाएपछि…